Vakio ny "Porofon'ny maha-Kristianina" tt. 66-75; Ao amin'ny boky "Ny Dia ho eo amin'i Kristy."
Ambaran'i Ellen White (ankoatra ny zavatra hafa) fa rehefa mamaly marina ny antson'Ilay Mpampianatra lehibe isika dia "irintsika ny hitovy endrika Aminy, hivelona amin'ny fanahiny, hanao ny sitrapony ary hampifaly Azy amin'ny zavatra rehetra" DHK, t. 68. "Ny adidy tonga fifaliana" - DHK, t. 69 hoy izy, rehefa miaraka amin'i Kristy.
Vakio koa ny ao amin'ny Mat. 5, 6, 7. Ilay Toriteny teo an-tendrombohitra no hita eto, izay anisan'ny famintinana ireo lesona goavana tian'Ilay Mpampianatra lehibe ho takatry ny mpianany, sady fototra iorenan'ny fanjakany.
FANONTANIANA HI FANAKALOZAN- KEVITRA:
1. Tahaka ny niresahan'Andriamanitra tamin'i Adama sy Eva ary i Jakôba no iresahan'Andriamanitra amintsika koa. Tsapany ny faniriantsika lalina, ary manaitra antsika Izy (toy ny nataony tamin'i Bartimeo) mba hieritreritra momba ny maha-isika antsika sy ny làlana izorantsika. Araka izany, saino hoe manao ahoana ny fomba fampianarantsika Baiboly ny zanatsika sy isika samy isika. Ahoana no hahatonga ny fampianarana Balboly ho mandresy lahatra ary mitondra fiovana marina eo amin'ny fiainan'ny olona?
2. Mahakasika ny fiainanao manokana ihany ve ilay fanontaniana hoe: aiza ho aiza no misy anao eo amin'ny lalam-piainanao? Sa mety hanampy anao ny firesahana izany amin'ny olon-kafa azonao itokiana? «Tenan'i Kristy ny fiangonana 1 Kôr. 12:27). Ahoana no anehoan'io lohahevitra io fa ny firesahana amin'ny hafa dia mety ho lalana hahatakarana izay tian'i Kristy ho fantatrao?
3. Hitantsika ao amin'ny lesona Alakamisy fa raha vao nahiratra ny mason'i Bartimeo - vao sitrana tamin'ireny fahajambana ara-batana (sy ara-panahy) nahazo azy izy - dia nanaraka an'i Jesôsy teny an-dalana ho any Jerosalema. Teo amin'izany lalana izany no nandrenesany isan'andro ny amin'ny fahendren'llay Mpampianatra lehibe. Azontsika inoana fa maniry ny hitovy endrika Aminy izy izao, hanana ny toetrany, ary hanao ny sitrapony. Ahoana no mety hahatonga ny olona iray hahita "fifaliana", araka ny voalazan'ny Dia ho eo amin'i Kristy, amin'ny fanarahana fitsipika ambony tahaka izay nasongadin'i Jesôsy tao amin'ny toriteny teo an-tendrombohitra?
4. Saintsaino lalina ny fanontaniana farany ao amin'ny lesona Alakamisy. Ahoana no hahaizantsika manavaka ny tsara sy ny ratsy? Ahoana no hamaritantsika ny atao hoe tsara? Ary ny atao hoe ratsy? Zava-dehibe kokoa aza angamba ny zavatra ataontsika vokatr'izany fahalalana izany, noho ny hoe manana ilay fahalalana, nahoana?